Kedu ka ị ga-esi kọwaa Onye Okike ọzọ maka mkpali ha maka vidiyo gị? - GoViral
Mbido » Kedu ka ị ga-esi kọwaa Onye Okike ọzọ maka mkpali ha maka vidiyo gị?
YouTube juputara na ndị na-emepụta ọdịnaya na-akpali akpali, ọ dịghịkwa njọ itinye ọdịnaya ndị ọzọ na vidiyo gị. Agbanyeghị, mgbe ị na-eme ya, ọ dị mkpa ka ị kọwaa ndị okike nyere gị mmụọ nsọ maka vidiyo gị.
N'isiokwu a, anyị ga-ewere gị usoro niile nke ị nwere ike isi kwuo na ọ bụ ndị okike ndị ọzọ na YouTube. Mana nke mbụ, ka anyị lelee ihe kpatara njirimara onye okike vidiyo ji dị mkpa na YouTube na mbụ.
Mkpa nke njiri na YouTube
Cheedị echiche nke a - naanị ị lere vidiyo na YouTube nke otu n'ime ndị mepụtara ọdịnaya ọkacha mmasị gị bipụtara, ma ịchọrọ itinye ụfọdụ ozi sitere na vidiyo na ọdịnaya gị. N'ọnọdụ dị otú ahụ, e nwere ihe abụọ nwere ike ime nke a:
Tinye ozi ahụ n'ebughị ụzọ nweta isi mmalite
Tinye ozi ma nweta isi iyi
Ime nke ikpeazụ bụ ihe a maara dị ka njirimara ọdịnaya. N'ụzọ dị mfe, ọ bụ ụzọ ị ga-esi nye otuto nye onye okike nke ihe onwunwe ya kpaliri gị. Njirimara bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji tinye ntụkwasị obi na ọdịnaya YouTube ị na-ebipụta. Ọ na-enyekwa ndị na-ege gị ntị ohere ịlele ọdịnaya gị site na ebumnuche ebumnuche.
N'ezie, ị nwere ike họrọ ịghara ịkele isi iyi ahụ. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịkpata nsogbu, karịsịa ma ọ bụrụ na i wepụta ozi ahụ otu ụzọ e si kọwaa ya n'ihe odide ahụ. Maka nmalite, enwere ike bo gị ebubo maka nkwutọ, na nke ka njọ, ọdịnaya gị nwere ike nweta ikike nwebisiinka wee wedata na YouTube. Yabụ, mgbe ị na-eji ma ọ bụ megharịa ozi sitere na ọdịnaya nke ndị okike ndị ọzọ biputere, ọ bụ mmasị gị kacha mma ịkọwapụta.
Ọ bụrụ na ịmaghị ka njirimara si arụ ọrụ na YouTube, gụọ na ya, ka anyị ga-ekpuchi usoro niile dị mkpa ịchọrọ ịme na ngalaba na-esote.
Otu esi ekenye ndị nrụpụta ọdịnaya ndị ọzọ na YouTube
Ugbu a ịmara ihe niile gbasara mkpa njiri dị na YouTube, ọ bụ oge ilele usoro niile ị ga-eme iji gosi ndị okike ndị ọzọ n'elu ikpo okwu. Njirimara na YouTube na-eme site na njiri 'Mentions', ya bụ, ịkpọtu ndị okike ndị ọzọ. Ị nwere ike ime nke a site n'ịkpọ ndị okike ndị ọzọ na aha vidiyo ma ọ bụ na nkọwa, ma ọ bụ ha abụọ.
N'agbanyeghị ebe ịchọrọ ịkpọ ndị okike ndị ọzọ, nke a bụ ihe ị ga-eme:
Ozugbo akara '@' gachara, pịnye aha ọwa nke onye okike ịchọrọ ịkpọ aha
Ozugbo ịmalite pịnye aha, YouTube ga-enye ntụnye.
Họrọ ọwa ziri ezi n'ime ndepụta ntụnye.
Cheta ịhọrọ ọwa ahụ na listi YouTube nyere, n'ihi na ịghara iburu ọwa ọ bụla na listi ahụ ga-eme ka aha ahụ ghara ịdị irè.
Usoro a bụ otu maka ngwaọrụ niile - Android, PC, na iOS. Dị ka o kwesịrị, ị ga-eji ngalaba nkọwa maka ịkpọ ndị okike ndị ọzọ, ebe ọ na-enye ọtụtụ ihe n'ihe gbasara ohere ma e jiri ya tụnyere aha vidiyo. Enweghị oke maka ole ndị okike ị nwere ike ịkọ, ewezuga oke agwa nke aha vidiyo na ngalaba nkọwa.
Ndị na-ekiri ya nwere ike pịa aha ndị ahụ iji lelee akụkụ ozi onye okike, nke na-egosipụta ozi ọwa dị ka nkọwa ọwa na vidiyo ndị ọwa bulitere na nso nso a. Ndị na-emepụta ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike ịkpọ ọwa gị n'otu ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na ha enweta mkpali sitere na ọdịnaya gị maka vidiyo ha. Ị nwere ike idobe aha aha ọwa gị site na ịga na taabụ 'Mentions' mgbe ịpịrị mgbịrịgba ngosi na ngwa YouTube ma ọ bụ webụsaịtị.
Tupu anyị akwụsị akụkọ a, anyị ga-achọ ichetara gị ọrụ ndị a na-enye GoViral - ngwa na-enye gị ohere ịnweta nlele YouTube na ndị debanyere aha YouTube n'efu. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịkwalite stats njikọ aka onye ọrụ ọwa YouTube site n'inweta mmasị na nkọwa YouTube n'efu.
Kedu ka ị ga-esi kọwaa Onye Okike ọzọ maka mkpali ha maka vidiyo gị? site na GoViral Writing Team, 7 April 2022
Ọzọkwa na GoViral
Ruo afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ndị na-ere ahịa agaghị eche na YouTube n'otu ụkwụ dị ka Facebook, Instagram, na Twitter. Otú ọ dị, oge agbanweela. Taa, YouTube ka nwere ike…
Mgbe ndị ọrụ YouTube na-eleta ọwa nke ha na-amachaghị maka ya, ha na-atụ anya ụfọdụ ozi ozugbo. Kedu ụdị vidiyo ọwa ahụ na-eme? Gịnị bụ ebumnobi ọwa ahụ? Na ihe…
Usoro ire ahịa vidiyo YouTube nke nwere ike iwe na 2022
Ọ bụ ezie na ejirila ọdịnaya mee ihe maka ịzụ ahịa dijitalụ ruo ọtụtụ afọ, ọtụtụ ndị nwere ike ọ gaghị ama iji vidiyo na-eto eto ha. Agbanyeghị, vidiyo bụ eze ọdịnaya na…
Otu GoViral Edemede
Nwere ike 27, 2022
Anyị na-enye ọbụna ndị ọzọ ahịa ọrụ